बसन्तकुमार नेम्वाङ ओली सपनाका नयाँ सारथी « Mechipost.com
बसन्तकुमार नेम्वाङ ओली सपनाका नयाँ सारथी
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७६, बिहीबार २१:१०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो एउटा सपना बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन् – हिमाल छेडेर तीव्र गतिको रेल ल्याउने अनि नेपालको पानीजहाज चलाउने । रेल र पानीजहाजको सपना उनी आफैं कार्यान्वयन गर्न भने सक्दैनन् । ओली सपनालाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याउन काम गर्ने मन्त्रालय हो– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ।
विकट गाउँमा पुल र राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्ने जिम्मा पनि भएको भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुन्छ । डेढ वर्ष भौतिक मन्त्रालय चलाएका रघुवीर महासेठको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउनुभएको छ र आफ्नो सपनाको एक महत्वपूर्ण सारथी बसन्तकुमार नेम्वाङलाई बनाउनुभएको छ ।
सामान्यतः मन्त्रीले पदभार सम्हालेको दिन यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर योजना सुनाउँछन् । बिहीबार पदभार सम्हालेका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेम्वाङले कुनै महत्वकांक्षी योजना सुनाउनुभएन् । बरू उनले आफू मन्त्रालयमा नयाँ भएको र कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेम्वाङले पदभार सम्हाल्नुअघि मन्त्रालयमा प्रगति नै प्रगति भएको भएको भनेर निवर्तमान मन्त्री महासेठले आफूले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउनु भएको थियो । महासेठलाई बिदाइ गर्ने कार्यक्रममा कर्मचारीले समेत २० महिनासम्म सफल नेतृत्व प्रदान गरेको भनेर महासेठको प्रशंसा गरेका थिए ।
महासेठले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा आएका मन्त्री नेम्वाङले आफूले छोडेका अधुरा कामलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो तर आफू मन्त्रीबाट हट्नुको कारण भने खुलाउनु भएन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयसँग १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट छ । जसमध्ये पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब छ । पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ जबकी पुँजीगत खर्चको झन्डै आधा बजेट भौतिकसँगै हुन्छ ।
मन्त्रालयको यही अवस्था बुझेका नवनियुक्त मन्त्री नेम्वाङले हतारिएर जवाफ दिनुभएन । पत्रकारका प्रश्न, सडकका खाल्डाखुल्डी अनि सडक निर्माणमा भएको ढिला सुस्ती ठेकेदारको लपराबाही सुधार्ने योजना के छ भन्नेमै केन्द्रित थिए ।
जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो “मेरा प्राथमिकताबारे कुनै रेडिमेट सोच छैन । यो मन्त्रालयमा प्रवेश नगरे पनि काठमाडौंका समस्या देखेको छु । काठमाडौंका सडक हेर्ने अरू निकाय पनि छन् । ठूला सडकमा पिच उप्किने, धुलो उड्ने समस्या छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न धेरै समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।”
एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले कर्मचारीसँग छलफल गरेर मात्रै आफ्नो योजना बनाउने सुनाउनु भयो । “म अहिले प्रवेशमात्रै गरेको छु । म प्राविधिक पनि होइन” उहाँले भन्नुभयो “हुनपर्ने काम भएको छ की छैन । जवाफदेहिता पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्छु । आवश्यक नीति बनाएर मन्त्रालयका समस्यालाई सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई एकीकरण गरेर प्रगित हासिल गर्न मलाई पठाइएको छ ।”
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई पूरा गर्न यो सराकारसँग मोटामोटी तीन वर्ष बाँकी छ । प्रधामन्त्री केपी ओलीका महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न नेम्वाङ प्रमुख सारथी बन्न सक्नुहोला ?
“बसन्त पार्टीले दिएको जस्तो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने व्यक्ति हुन । त्यही भएर भौतिकमा खस्किएको साख जोगाउन उनलाई लगिएको हो” प्रधामन्त्री ओली निकटका एक नेताले भन्नुभयो “प्रधानमन्त्रीले धेरै सोचेर नै यो जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।”
‘लो प्रोफाइल’ मा बस्न रूचाउने नेम्वाङले सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय कसरी पाउनुभयो ?
२०४८ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमै पाँचथरबाट सांसद बनेका नेम्वाङ पार्टीका लागि त्याग गरेका नेता हुनुहुन्छ । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पनि उहाँले जित हात पार्नुभयो । कानुनी पृष्ठभूमिका आएपनि तत्कालीन नेकपा एमालेले निर्वाचनमा उमेदवार बन्न भनेपछि २९ वर्षीय वसन्त उमेदवार बन्नुभयो, निर्वाचनमा विजयी पनि हुनुभयो ।
त्यसयता निरन्तर पार्टीका लागि इमान्दार भएर खटिएका मात्रै होइन लिम्बुवान र माओवादीको दबदबा रोक्न समेत अहोरात्र खटिएको नेकपाका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताउनुभयो ।
नेम्वाङ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ निकट मानिनुहुन्छ । उहाँहरू नातेदार समेत हुनुहुन्छ । मन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै उहाँ संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटन पुग्नुभयो । त्यही भएर पदभार सम्हाल्न उहाँ ढिला मन्त्रालय पुग्नुभयो ।
उहाँले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएर काम गरिसक्नु भएको छ । २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले उहाँलाई प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्योबाहेक उहाँले अरू राजकीय पद सम्हाल्नु भएको छैन् ।
डेढ वर्षअघि धेरैलाई पछि पार्दै भौतिक मन्त्रीको जिम्मा पाएका इन्जिनियर पृष्ठभूमिका रघुवीर महासेठ प्रधानमन्त्रीको नजरमा असफल सावित हुनुभयो । महासेठका उत्तराधिकारी बन्नुभएका नेम्वाङको परीक्षा आजैदेखि सुरू भएको छ । (सेतोपाटी डटकमबाट साभार)
तस्वीरहरुः सन्दीप राईको फेसबुकबाट ।